काठमाडौं । अमेरिका गरिएको एक अध्ययन अनुसार नियमित ओखर खानाले डिप्रेशनको खतरा कम हुन्छ र एकाग्रताको स्तर राम्रो हुँदै जान्छ । क्यालिफोर्नियाको अनुसन्धानकर्ताहरुले नियमित ओखर खाने मानिसहरुमा डिप्रेसनको समस्या २६ प्रतिशत कम पाइएको छ...
टमाटरको जुस पिएर तौल घटाउने की ?
काठमाडौं । अनावश्यक बोसो लागेको भद्दा शरीर कसलाई पो मन पर्ला र मोटो शरीर रोगको घर हो भन्दा अत्युक्ती नहोला । आजकल तौल बढेर सबैलाई समस्या भइरहेको छ । वजन घटाउनका लागि डाइटिङ गर्ने वा जिम...
लामखुट्टेको टोकाईबाट ब्याक्टेरिया,भाइरस र परजिवीद्वारा लाग्ने ६ खतरनाक रोगहरु पर्दछन । संक्रमीत एनोफिलिज लामखुट्टेको टोकाइले प्लाज्मोडियम परजीवीबाट लाग्ने मलेरिया वा औलो, एडिज एजिप्टाई र केही हदसम्म अल्बोपिक्टस पोथी लामखुट्टेको टोकाईबाट डेंगु ज्वरो, एडिज...
सन्दर्भ ः लागूपदार्थ ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस लागुऔषधका कारोवारी बढेका छन् । जिल्लाका कुल मुद्दाहरुमा ९० प्रतिशत लागूऔषधका रहेको जिल्ला प्रहरी रुपन्देही बताउँछ ।८० प्रतिशत विद्यालय कलेजकामा अध्ययनरत सम्पन्न बाबुआमाका छोराछोरी छन् ।...
डा. प्रकाश बुढाथोकी पछिल्लो समय काठमाण्डौं उपत्यकामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय मापसे गरेर सवारीसाधन हा“क्ने महिलाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पाश्चात्य र आधुनिकताले...
डा. प्रकाश बुढाथोकी समाजमा उपभोक्तावादी संस्कृति हावी हु“दै जा“दा नया“ पिंढीले आफूलाई उदार र खुला विचारको पक्षमा उभ्याएको छ । नया“ पिढीको जीवनशैलीमा आएका कतिपय खुला र परिवर्तित व्यवहारका एउटा नकारात्मक कडी सहरी समाजमा युवतीहरु...
काठमाडौं । प्रविधि तथा अन्य सुविधाका कारण मानिसहरुमा मोटोपनको समस्याले खुबै सताउन थालेको छ । भर्खरका युवाहरुको पनि अन्य सबै भाग फिट भएतापनि पेट भने पुत्लुक्क बाहिर निस्किएको हुन्छ । हुन त घरमा आमाबाबा...
भैरहवा । प्रदेश ५ का तीन जिल्ला औलोको उच्च जोखिममा रहेका पाइएको छ। प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया र कपिलवस्तु जिल्ला औलो रोगको उच्च जोखिममा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वाथ्य सूचना अधिकृत शैलेन्द्र...
काठमाडौँ । भनिन्छ सकारात्मक सोचले मानिसको आधा भन्दा बढी रोगहरु निको हुन्छ । जब मानिसको मनस्थितीमा नकारात्मक सोच आउन थाल्छ तब मानिस एक्लिन थाल्छ र केही न केही नकारात्मक काम गर्न थाल्छ । हाल सम्म...
कागतीपानी पिउदा फाईदै फाइदा
कागतीपानी पिउने बानी छ ? छ भने एकदम राम्रो र छैन भने आजै देखि पिउन सुरु गर्नुहोस् । किनकि कागतीपानी पिउनेहरूका लागि फाइदैफाइदा छन् । लेमनमा भिटामिन ‘सी’ पर्याप्त मात्रामा पाइने भएकाले कागतीपानी खाने...
यसरी गर्नुपर्छ मेकअप
मेकअप गर्दा सबैभन्दा पहिला क्लिन्जिङ क्रिमले अनुहार सफा गर्ने । त्यसपछि कटनमा टोनर राखेर अनुहारमा लगाउने । छाला चिल्लो छ भने कटनको कपडामा आइसको टुक्रा राखेर तीनदेखि पाँच मिनेटसम्म अनुहारमा दल्ने । यसले मेकअपलाई धेरै समयसम्म...
पाठेघरको मुख, योनी तथा योनी मार्गमा कुनै असामान्य रोग वा रोगका लक्षण भएरनभएको पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणलाई कल्पोस्कोपी भनिन्छ। कल्पोस्कोपी गर्दा गर्दा स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकबाट कल्पोस्कोप भन्ने एक विशेष उपकरणको प्रयोग गरिन्छ।
महिलाको रोग परीक्षण गर्ने सिलसिलामा गर्भासय श्राव (प्याप स्मेयर) को जाँच गर्दा कुनै खराबी देखिएमा वा खराबीको शंका लागेमा चिकित्सकले कल्पोस्कोपी गर्ने सुझाव दिन्छन्।
कल्पोस्कोपी गर्दा यदि चिकित्सकले महिला जनेन्द्रीय (पाठेघरको मुख, योनीद्वार) आदिमा असामान्य कोषिकाहरु पाइएमा, कोषिकाहरुको असामान्य वृृद्धि पाइएमा ती कोषिकाको बायोप्सी परीक्षण गर्न केही नमुनाहरु संकलन गर्ने गर्छन्।
धेरै महिला गुप्ताङ्गको परीक्षण गर्नुपूर्व एक किसिमको तनावमा रहने र परीक्षण गर्न हिच्किचाउने गरेको पाइन्छ। कल्पोस्कोपी गर्नुपूर्व र प्रक्रिया गर्दा अपनाउनुपर्ने कुराहरु बुझेमा कुनै असहज महसुस गर्नुपर्दैन।
कल्पोस्कोपी किन गरिन्छ?
महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य ठीक भए÷नभएको थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि महिलाले स्त्री रोग विशेषज्ञकोमा कुनै समस्या लिएर गएको अवस्थामा ती महिलाको गर्भासय श्राव परीक्षण गर्दा वा पेटको जाँच गर्दा कुनै असामान्य परिस्थिति देखापरेमा कल्पोस्कोपी गराउन सक्छन्।
सामान्यतया निम्न रोगहरु पत्ता लगाउन कल्पोस्कोपी गरिन्छः
पाठेघरको मुखको क्यान्सर– गुप्ताङ्गमा हुने घाउखटिरा, पाठेघरको मुखको सुजन, पाठेघरको मुख र योनी क्षेत्रका कोषिकाहरुमा क्यान्सर हुने लक्षण पाइएमा वा त्यसखाले रोग हुनुपूर्व देखिने परिवर्तनहरुको शंका लागेमा, योनी क्षेत्रको बाहिरी भागमा क्यान्सर भएमा वा योनी क्षेत्र, योनीद्वार वा बाहिरी भागमा क्यान्सर हुनुपूर्वदेखि परिवर्तनको शंका लागेमा।
कल्पोस्कोपी परीक्षणले के गर्छ ?
पाठेघर, पाठेघरको मुख वा योनीद्वारमा हुने घाउ, खटिरा पत्ता लगाउँछ। रोगका ती शंकास्पद क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित असामान्य अवस्था वा क्षेत्रको पहिचान गर्छ।
रोगका शंकास्पद क्षेत्रका असामान्य कोषिकाहरुको जाँच गर्न मद्दत पुग्छ। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने खालका क्यान्सर रोग भएरनभएको पत्ता लगाउँछ।
योनीद्वारमा क्यान्सरका घातक कोषिकाहरु उत्पादन हुनुपूर्व र ती कोषिकाहरु उत्पादित भएपश्चात् त्यहाँ देखिने परिवर्तनहरुबारे पत्ता लगाउन मद्दत र्पुयाउँछ।
– योनी, योनीद्वार, गर्भासय वा पाठेघरको मुखमा शंकास्पद गिर्खा, घाउ, खटिरा देखिएमा, गर्भासय श्राव परीक्षण गर्दा असामान्य घाउ, खटिराको लक्षण पाइएमा वा क्यान्सरको शंका लागेमा,
– कडा जोखिमका रोगहरु पत्ता लगाउन गर्भासय श्राव परीक्षण गर्दा असामान्य नतिजा पाइएमा,
– गर्भासयभित्र कडा खाले वा जटिल रोगको इतिहास भएमा, गर्भासयमा जोखिमका रोगको उपचार गरी तिनको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा,
– बालिकामा हुने यौनहिंसा वा बलात्कारजस्ता अपराधको निक्र्योल गर्नुपरेमा।
कल्पोस्कोपी के हो र किन गरिन्छ?
पाठेघरको मुख, योनी तथा योनी मार्गमा कुनै असामान्य रोग वा रोगका लक्षण भएरनभएको पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणलाई कल्पोस्कोपी भनिन्छ। कल्पोस्कोपी गर्दा गर्दा स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकबाट कल्पोस्कोप भन्ने एक विशेष उपकरणको प्रयोग गरिन्छ। महिलाको रोग...